EyoMsintsi 24, 2018 admin
B Foundation uqala kunye nezicwangciso ukuphuhlisa Bitcoin ecosystem
The B Foundation lisisiseko entsha Bitcoin ukuba yaseKapa yaziswa ngokusesikweni namhlanje, kunye isaziso ukuza kule nkomfa Baltic Honeybadger Bitcoin e Riga, Lathviya. The B Foundation ufuna ukuqhubela phambili uphuhliso Bitcoin eziphilayo. Ekuyilweni B Foundation kwenzeke ngenxa iminikelo evela @sysmannet @francispouliot_ @Trezor @WhalePanda @starkness @ adam3us @giacomozucco @AlenaSatoshi @hodlhodl @lopp & Kaninzi.
Siza mezela "The B" ngenkxaso uhlobo ka @AlenaSatoshi @ adam3us @starkness @giacomozucco @pavolrusnak @slushcz @francispouliot_ @keidunm @kanzure @lopp yaye kungekudala kakhulu ukuba kwaziswa.. pic.twitter.com/Ahi536OGX2
— the B (@TheB_Foundation) EyoMsintsi 23, 2018
labarhwebi enkulu Brazil xa uqala exchange crypto
Le nkampani umzali lawona umthengisi eBrazil ezizimeleyo ucwangcisa exchange cryptocurrency. grupo XP, elingumnini labarhwebi niqinile XP Investimentos, zokusungula eqongeni kule “kwiinyanga ezizayo,” yokuyifaka iza kuxhasa Trading Bitcoin.
Ethetha emcimbini e Sao Paulo, igosa le nkampani elinoLawulo oluPhezulu, Guilherme Benchimol, wathi: “Siye waziva unyanzelekile ukuba uqale phambili kule emarikeni.” Benchimol ucatshulwe esithi bumabumela wenza isigqibo sokuba iqalise le exchange - XDEX ebizwa - ngokuba 3 million okanye ngoko Brazil kakade ezinye Bitcoin, nakuba ezimbalwa kakhulu, emhlabeni 600,000, babe Holdings esitokisini.
Ingxelo Daily Market Kraken for 23.09.2018
$75.9M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin, John M...